Kooxda Arsenal oo Gurigeeda ku Garaacday Bayern Munich – Radio Daljir
Oktoobar 21, 2015 4:53 b 0
Arbaco, Oktoobar 21, 2015 (Daljir) —Kooxda Arsenal ayaa guul dahabi ah Emirates Stadium kaga gaadhay kooxda Bayern Munich, waxayna Arsenal guushan ku gaadhay 2:0, waxaana goolasha ukala dhaliyay Olivier Giroud iyo Mesut Özil. Arsenal ayaa soo noolaysay rajadeedii sii baaba aysay ee Champions Leaque-ga, waxayna Gunners kala saraynta Goup F ka soo gashay kaalinta lixaad halka Bayern Munich iyo Olympiokos ay min lix dhibcood kaalinta kowaad iyo labaad ugu jiraan.
Kooxda Arsenal ayaa Bayern Munich ku soo dhawaysay garoonkeeda Emirates Stadium, waxayna labada kooxood kulankan ciyaarayeen iyaga oo leh laba ujeedo oo kala duwan. Arsenal ayaa kulankan ciyaaraysay iyada oo raadinaysa dhibcihii ugu horeeyay ee Champions Leaque-ga ee xili ciyaareedkanka ay hesho , waxayna Gunners doonaysay inay ka soo kabsato laba guuldaro oo ka soo gaadhay kooxda Olympiakos iyo Zagreb.
Laakiin kooxda Bayern Munich ayaa kulankan iskeentay iyada oo raadinaysay guusheedii saddexaad oo xidhiidh ah ee Champions Leaque-ga, waxayna ku fikiraysay sidii ay u sii wadan lahayd guulaheeda boqolkiiba boqolka ah ee ay xili ciyaareedkan ku bilaabtay tartamada oo dhan.Jamaahiirta Bayern Munich ayaa ka mudaharaaday tigidhada qaaliga ah ee Emirates iyaga oo soo qaatay boodhan ay arintaas ku diidan yihiin.
Kulankan ayaa ahaa mid xiiso badan oo si wayn loo sugaayay kooxda martida ahayd ee Bayern Munich ayaa ciyaarta ku bilaabatay iyada dardar fiican iyo kubbad haysasho badan laakiin daqiiadii 7 aad ayuu Sanchez kubbad fiican u abuuray Ozil kaas oo kubbad joog hoose ku socota ku tuuray goolka Bayern Munich laakiin Manuel Neuer ayaan wax halis ah galin.
Daqiiqadii 11 aad ayuu Thiago helay fursad halis ah kadib markii uu kubbad hal-ka -laba ah la ciyaaray Muller laakiin goolhaye Petr Cech oo kulankan qaab ciyaareed cajiib ah soo bandhigay ayaa kooxdiisa halista ka saaray.Bayern Munich ayaa u muuqatay inay ciyaartaba la wareegtay iyada oo Arsenal difaaca ku ururisay, waxaana markale daqiiqadii 27 aad goolka Gunners darbo halis ah ku tuuray Arturo Vidal balse markale Petr Cech ayaa kooxdiisa halista ka ilaaliyay.
Kadib markii ay 30 daqiiqo Arsenal difaac iyo halis iska ilaalin ku jirtay ayay qaab ciyaareedkeeda wax ka badashay waxayna bilawday inay weerar deg deg ah ku qaado goolka Bayern Munich isla markaana ay difaaca dib ugu wada laabato marka ay kubbadu cagteeda ka baxdo.Arsenal ayaa si gaar ah u ilaalinaysay Robert Lewandowski.
Daqiiqadii 31 aad ayay Arsenal soo qaadatay fursadeeda ugu halista badnayd, waxaana kubbad gool loo fishay madax ku darbeeyay Theo Walcott balse goolhaye Manuel Neuer ayaa muujiyay sababta uu u yahay goolhayaha aduunka ugu fiican, wuxuuna badbaadiyay kubbad qaqiiqadii u muuqtay inay gool cad tahay isaga oo gacanta bidix dirqi iskaga saaray.
Laakiin dadaalka ay labada kooxood sameeyeen ayaan noqon mid lagu faa’iiday oo goolal lagu dhaliyay, waxayna labada kooxood ku kala nasteen barbaro gool la’aan ah. halkan kaga bogo xogta qaybta hore ee kulankan iyo sida ay labada kooxood uu badhigoodu ahaa.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay ciyaartu noqotay mid aan la saadaalin karin iyada oo Bayern Munich markale soo labatay iyada oo ah kooxda inta badan gool laga filan karo. Douglas Costa, Robert Lewendowski iyo Thomas Muller ayaa dhamaantood helay fursado goolal lagu dhalin karayay iyada oo Lewendowski uu helay fursada ugu halista badnayd Koscielny ayaa kooxdiisa gool cadaan u dhawaa ka badbaadiyay.
Daqiiqadii 57 aad ayay Arsenal dhibaato dhaawac soo gaadhay kadib markii uu Aaron Ramsey dhawac muruqa ahi soo gaadhay waxaana lagu soo badalay Alex Oxlade-Chamberlain.Ramsey ayaa awoodi waayay inuu ciyaarta sii wato wuxuna dalbatay in la badalo.
Kadib markii ay Bayern Munich ahayd kooxda fursadaha ugu badan heshay ayay tababare Wenger ciyaarta ka saaray Theo Walcott, wuxuuna badal ku soo galiyay Olivier Giroud oo baryahan danbe noqoday dheemanta Gunners kursiga kaydka u fadhiya, badalka uu Wenger sameeyay ayaana natiijada ciyaarta wax ka badalay.
Saddex daqiiqo oo kaliya markii uu Olivier Giroud ciyaarta ku jiray ayuu kooxdiisa Arsenal udhaliyay goolka ay sida wayn ugu baahnayd, wuxuuna Giroud kooxdiisa goolka furitaanka udhaliyay daqiiqadii 77 aad isaga oo ka faa’iidaystay kubbad laaga xorta ahayd oo uu Cazorla soo darbeyay, laakiin Giroud ayaa goolkan ku dhaliyay gacan iyo madax wada socda balse garsoorayaasha kulankan ayaana waxba tilmaamin.
Bayern Munich ayaa dadaal ugu jirtay sidii ay iskaga soo celin lahayd goolka looga hormaray laakiin Arsenal ayaa u umuuqatay inay dib heshay kalsooni iyo qaab ciyaareed fiican. Kadib markii uu Lewandowski iska lumiyay fursad uu goolka u furnaa ayay Arsenal soo ku ciqaabtay kadib markii ay fursadeeda ka faa’iidaysatay.
Intii lagu jiray afar daqiiqado oo dheeri ah oo ciyaarta lagu daray ayuu Héctor Bellerín sameeyay orod aan caadi ahayn oo kala dhantaalay difaaca Bayern Munich wuxuuna si cajiib ah kubbada ula soo galay xerada ganaaxa Bayern kadib ayuuna kubbada u sii dhiibtay Mesut Oo Ozil oo goolka Bayern Munich oo goolhayaha oo kaliyi ku jiray, Ozil ayaana darbo gaaban ku tuuray goolka Bayern laakiin Neuer ayaa u muuqtay inuu sameeyay badbaadin balse kubbada ayaa xariiqada goolka dhaaftay sidaana Gunners ayaa kula timid goolkeeda labaad iyada oo ciyaarta ka dhigay 2:0 ku heshay goolka kalsoonida.
Xaqiiqadii waxa uu Héctor Bellerín sameeyay ayaa ahaa waxaan la rumaysan karin taas oo keebtay in Gunners ay hesho goolka keeda labaad. Sarkaalka shanaad ee garsoorayaasha FIFA lagu soo kordhiyay ayaa tilmaamay inay kubbadu xariiqada dhaaftay.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:0 ay Arsenal ku gaadhay guul ay ku badbaadsan karto xili ciyaareedkeeda Champions Leaque-ga waxayna Gunners kaalinta saddexaad ka soo gashay Group F oo ay Bayern Munich iyo Olympiokaso kaalmaha hore ku jiraan.